မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 18
အ၀ိဇ္ဇာသည် အတိတ်အကြောင်းမူလ၊ တဏှာသည် ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းမူလ လို့ မှတ်လိုက်ပါ။ သံသရာမှာ အနေကြာဖို့ သူတို့နှစ်ပါး တစ်လှည့်စီ ခေါင်းဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ အတိတ်ဘ၀က အ၀ိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်လုပ် တဏှာက နောက်လိုက်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀မှာ တဏှာက ခေါင်းဆောင်လုပ် အ၀ိဇ္ဇာကနောက်လိုက်၊ ဒီလိုနဲ့ သံသရာကို မရှည် ရှည်အောင် ဆွဲဆန့်တတ်တဲ့တရားနှစ်ပါးဟာ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာပါပဲ။ အ၀ိဇ္ဇာဟာ အဘိဓမ္မာအရှိတရားအနေနဲ့ ပြောရရင် မောဟ။ မသိတာဟာ မောဟ၊ သို့မဟုတ် အ၀ိဇ္ဇာ။ သစ္စာလေးပါးကို မသိတာ အ၀ိဇ္ဇာ။ သစ္စာလေးပါးသိရင် ၀ိဇ္ဇာ။ ဒါက လိုရင်းပြောတာ။ အတိအကျပြောရရင် အ၀ိဇ္ဇာရဲ့ မသိခြင်း (၈)ချက်ရှိတယ်။ ၁။ ရှေ့အစွန်းကိုလဲ မသိ (ပုဗ္ဗန္တ)၊ ၂။ နောက်အစွန်းကိုလဲ မသိ (အပရန္တ)၊ ၃။ ရှေ့အစွန်း နောက်အစွန်းနှစ်ပါးကိုလဲ မသိ (ပုဗ္ဗန္တာပရန္တ)၊ ၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလဲ […]
စက်ဝိုင်းအကွက် နံပါတ်(၁)သည် လက်ရှိခန္ဓာဖြစ်ကြောင်း၊ အကွက်(၂)လက်ရှိခန္ဓာဖြစ်ကျိုးကို ပြထားခြင်းဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ ခေါ်ဆိုနေကြသည့် ခန္ဓာငါးပါးသည် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အကျိုးပင်ဖြစ်၏။ အကြောင်းတရားတို့တွင် အ၀ိဇ္ဇာသည် ကိလေသာဖြစ်၍ ကိလေသ၀ဋ်၊ သင်္ခါရသည် ကံဖြစ်၍ ကမ္မ၀ဋ်ဖြစ်၏။ လက်ရှိခန္ဓာငါးပါးသည် ထိုဝဋ်နှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသော အကျိုးတရားဖြစ်၍ ၀ိပါက၀ဋ်ဖြစ်၏။ ဒေသနာစဉ်အရ ကိလေသ၀ဋ်ကြောင့် ကမ္မ၀ဋ်ပေါ်၊ ကမ္မ၀ဋ်ကြောင့် ၀ိပါက၀ဋ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၀ဋ်သုံးပါးအမြင်ဖြင့်လည်း သိထားရမည်ဖြစ်၏။ သစ္စာဆိုက်သည့်အသိတရား မပေါ်သေးသရွေ့ အ၀ိဇ္ဇာ ဦးစီးနေပါ၏။ အ၀ိဇ္ဇာဦးစီးနေသရွေ့ လုပ်သမျှ ကံဖြစ်နေ၏။ ကံဖြစ်နေသရွေ့ ကံ၏ အကျိုးတရားတို့သည်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်၏။ ခေါင်းဆောင်ကိလေသာသည် အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာဖြစ်၏။ အတိတ်သံသရာတွင် အ၀ိဇ္ဇာက ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပြီး ပစ္စုပ္ပန်သံသရာတွင် တဏှာက ခေါင်းဆောင်နေ၏။ အတိတ်တွင် အ၀ိဇ္ဇာက ခေါင်းဆောင်၊ တဏှာက နောက်လိုက်ဖြစ်၏။ ပစ္စုပ္ပန်တွင် တဏှာက ခေါင်းဆောင် […]
ဒိဋ္ဌိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်လေးတွေကို မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသအဋ္ဌကထာ၊ ဒီဃနခသုတ်အဖွင့်မှာ အဋ္ဌကထာဆရာက သုံးသပ်ပြထားတာ ဒီနေရာမှာ တင်ပြချင်ပါတယ်။ အလွန်အင်မတန် သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒိဋ္ဌိ(၆၂)ပါးကို ပေါင်းပြောလိုက်ရင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တစ်မျိုးတည်းပဲ၊ လိုရင်း ခွဲပြောလိုက်ရင် သဿတဒိဋ္ဌိနဲ့ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့။ (သက္ကာယဒိဋ္ဌိ = သဿတဒိဋ္ဌိ + ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ)။ ဒီဖော်မြူလာအရ လူတိုင်းမှာ ဒိဋ္ဌိကတော့ ရှိနေတာပဲ။ သက္ကယဒိဋ္ဌိကတော့ မူရင်းပေါ့။ အချို့က သဿတဒိဋ္ဌိဘက်အားသန်တယ်၊ အချို့က ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိဘက်အားသန်တယ်။ ဒါကွာသွားမယ်။ အချို့ကျတော့လဲ နှစ်မျိုးလုံး တစ်လှည့်စီ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အယူတစ်ခု လက်လွှတ်ပြီးမှ စွန့်ပြီးမှ အခြားအယူတစ်ခုကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ယောက်ထဲက တစ်ချိန်တည်း လက်ခံလို့တော့ မရပါဘူး (သဿတံ ဂဟေတွာ တမ္ပိ အပ္ပဟာယ ဥစ္ဆေဒံဝါ ဧကစ္စသဿတံ […]
အနမတဂ္ဂေါယံ ဘိက္ခဝေ သံသာရော- သံသရာ၏အစကို မသိနိုင်ဟု ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့၏။ သတ္တ၀ါတစ်ဦး၏ ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ်ကို နောက်ပြန် ပြန်တွေးကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါက အရင်ဘ၀က လူဖြစ်ခဲ့သည်၊ ထို့အရင်ဘ၀က နတ်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ထို့အရင်ဘ၀က ခွေးဖြစ်ခဲ့သည် စသည်ဖြင့် မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံး ဖြစ်နေလေသဖြင့် ဘုရားရှင်က ယင်းသို့ မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားရှင်၏ အလွန်လျှင်မြန်ထက်မြက်သော သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဖြင့် သတ္တ၀ါတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ်ကို ကုန်စဉ်အောင် ပြန်တွေးတော၍ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ပင် ဘုရားရှင် (၄၅)၀ါ သက်တမ်းကုန်သွားသော်မှ သတ္တ၀ါတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဘ၀ဖြစ်ပုံ ကကြိုးစုံကို ကုန်စဉ်အောင် ပြန်လည်ကြည့်ရှု၍ မပြီးနိုင်။ မရေမတွက်နိုင်လှသော သတ္တ၀ါတို့၏ အစကို မည်သို့လျှင် ကုန်စဉ်အောင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုပေးနိုင်ပါမည်နည်း။ ထိုမျှလောက် ဘ၀အသင်္ချေ အနေ အသေထပ်ခဲ့ရသဖြင့် သံသရာ၏အစကို ဘုရားရှင်သည် ရှာပြတော်မမူခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြနေ၍လည်း မဂ်ဖိုလ်ရရေးအတွက် အထောက်အပံ့မဖြစ်။ ပင်ပန်းရုံသာရှိမည်ဖြစ်၏။ သို့သော် ဓမ္မ၏ အစကိုတော့ […]
အရင်နေ့က စက်ဝိုင်းအကွက် နံပါတ်(၂)ကို သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၏။ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အပါယ်ဘုံသား မည်သို့ပင် ကွဲပြားနေစေကာမူ ဓမ္မသဘောအရ ကြည့်လျှင် အကွက်(၂)က တရားများသာ ဖြစ်စဉ်ကိုက် တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ ခန္ဓာအားဖြင့် ငါးပါး အကျဉ်းချုပ်တော့ နာမ်နှင့်ရုပ်သာ ရှိ၏။ အတိတ်ဘ၀က အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရလက်ချက်ကြောင့် ရရှိထားသော လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာပင် ဖြစ်ပါ၏။ အ၀ိဇ္ဇာသင်္ခါရသည် အကြောင်း၊ လက်ရှိခန္ဓာက အကျိုး- အကြောင်းကြောင့် ရရှိသော အကျိုးတရားသာဖြစ်၏။ အကြောင်းဘက်တွင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါမပါ၊ အကျိုးဘက်တွင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါမပါ၊ ဓမ္မသဘောသက်သက်ဖြစ်စဉ်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ ထိုဓမ္မဖြစ်စဉ်ကို သဘောပေါက်လျှင် လက်ရှိခန္ဓာသည် ဖန်ဆင်းရှင်တို့က ဖန်ဆင်းလိုက်သည်ဟူသော ထင်မြင်ချက်ပျောက်ကွယ်သွားရ၏။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ အသိဖြင့် ပြုတ်သွားခြင်းဖြစ်၏။ ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဦးက ဖန်ဆင်းလိုက်၍ ဖြစ်လာသည့် ခန္ဓာလား၊ သို့မဟုတ် မိဘနှစ်ပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံမှုကြောင့်သာ ပေါ်လာရသည့်ခန္ဓာများဖြစ်လေမလားဟူသော […]
စက်ဝိုင်းအကွက် နံပါတ်(၂)တွင် ၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာဟု တရားငါးပါးရှိ၏။ ထိုတရားငါးပါးသည် သူသူငါငါ သတ္တ၀ါတို့၏ လက်ရှိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်၏။ အကွက်(၁)တွင်ရှိသော အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသောတရားအစုသာဖြစ်၏။ အကွက်(၁)က တရားများကြောင့် အကွက်(၂)က တရားများပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မဖြစ်စဉ်အတိုင်း သိမြင်ထားမည်ဆိုလျှင် ဓမ္မကြောင့် ဓမ္မဖြစ်နေသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်ထားသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ ယောက်ျားမိန်းမ ဖြစ်စဉ်မဟုတ်သည်ကိုလည်း သိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်မူ ယခုလက်ရှိခန္ဓာငါးပါးသည် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်ကစခဲ့သဖြင့် ထိုပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်သည် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာဖြစ်၏။ ထို့နောက်ပေါ်လာရသော စိတ်အစဉ်သည် ပ၀တ္တိဝိညာဏ်ဖြစ်၏။ ထိုပ၀တ္တိဝိညာဏ်သည်လည်း ၀ိညာဏက္ခန္ဓာပင် ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်တွင် နာမ်အရ ဝေဒနာ သညာမှကြွင်းသော စေတသိက်(၅၀)သည် သင်္ခါရက္ခန္ဓာဖြစ်၏။ စေတနာခေါင်းဆောင်သဖြင့် စေတနာကို အဦးပြု၍ သင်္ခါရက္ခန္ဓာဟု အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏။ ရုပ်သည် ရူပက္ခန္ဓာဖြစ်၏။ မျက်စိ အဆင်းတိုက်သဖြင့် ပေါ်လာသည့် မြင်စိတ်သည် ပ၀တ္တိဝိညာဏ်ပင်ဖြစ်သဖြင့် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာတွင် […]
ဘ၀အသီသီးတွင် မှတ်တိုင် အသီးသီးရှိကြ၏။ အများဆိုင်မှတ်တိုင်အနေဖြင့်မူ လေးခုရှိ၏။ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏမှတ်တိုင်များဖြစ်၏။ ထိုမှတ်တိုင် အသီးသီးကို မည်သူမဆို မဖြတ်ကျော်၍ မရ။ ခန္ဓာရထားလမ်းရှိမှတ်တိုင်များဖြစ်၍ ခန္ဓာရထားသည် နောက်ပြန်မဆုတ်သောအားဖြင့် ထွက်လာခဲ့ရာ ခန္ဓာရသူတိုင်း ထိုမှတ်တိုင်လေးခုကို ဖြတ်ကျော်သွားရရိုး ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါ၏။ ဘ၀၏အစ ဇာတိကဟုဆိုရ၏။ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀၏အစဖြစ်ပါ၏။ ဇာတိသည် အမိဝမ်းခေါင်းတွင် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြင့် ကိန်းအောင်တည်နေ ပဋိသန္ဓေကာလပင်ဖြစ်၏။ ဇာတိသည် ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဘ၀ကို ဒုက္ခဖြင့် စခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင် မမှား။ သို့သော် ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း၏ ဆင်းရဲဒုက္ခအစုစုတို့ကို အ၀ိဇ္ဇာက ပိတ်ကာဖုံးလိုက်သဖြင့် မသိနိုင် မမြင်နိုင်တော့။ မသိသဖြင့် ဇာတိပိ ဒုက္ခံ-ဟု ဆိုငြားသော်လည်း လက်ခံနိုင်လောက်သည်အထိ အသိတရားတို့ ဖြစ်ပေါ်မလာခဲ့။ ထိုဒုက္ခသည် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ပြန်မသိနိုင်သော်လည်း ဇာတိမှတ်တိုင်ကမူ ထွက်ခွါလာကြရသည်သာ ဖြစ်၏။ ဇာတိမှတ်တိုင် လွန်ပြန်တော့ […]